Maqaallada Alex Khvoynitskaya ee Martech Zone |
Maqaallada by Alex Khvoynitskaya
Val Kelmuts waa madaxa fulinta iyo la-aasaasaha at Joogista, oo ah shirkad naqshadeynta ecommerce iyo horumarinta xarunteedu tahay Redwood City, California. Waxa uu leeyahay 10 sano oo waayo-aragnimo ah horumarinta software-ka caadiga ah, maamulka iibka, iyo horumarinta ganacsiga. Val waa khabiirka iibka Adobe Commerce ee la aqoonsan yahay, Shopify khabiir ganacsi oo shahaadey, iyo xubin PMI.
Hagaha degdega ah ee lagu abuurayo Xeerarka Gawaarida wax iibsiga gudaha Adobe Commerce (Magento)
Talaado, Febraayo 22, 2022 Talaado, Febraayo 22, 2022 Alex Khvoynitskaya
Abuuritaanka waayo-aragnimada wax iibsiga ee aan isbarbardhigga ahayn waa hadafka koowaad ee milkiile ganacsi kasta oo ecommerce ah. Iyadoo la raadinayo socodka joogtada ah ee macaamiisha, ganacsatadu waxay soo bandhigaan faa'iidooyin wax iibsiga oo kala duwan, sida qiimo dhimis iyo dallacaad, si ay wax iibsiga uga dhigaan mid lagu qanco. Mid ka mid ah siyaabaha suurtogalka ah ee tan lagu gaari karo waa iyada oo la abuurayo sharciyada gawaarida wax iibsiga. Waxaanu soo diyaarinay hagaha samaynta shuruucda gaadhiga wax iibsiga ee Adobe Commerce (oo hore loo odhan jiray Magento) si uu kaaga caawiyo samaynta nidaamka qiimo dhimista